Ugari hweMontenegro hwekugara muPorto Montenegro
Real Estate Kuwanikwa + Montenegro Citizenship
Chikamu chitsva Porto Montenegro
Boka Nzvimbo iguta nyowani muPorto Montenegro, uko mamiriro ekupemberera uye kugara zvakanaka kunotonga. Pano, pfungwa yenharaunda yakavakirwa pane pamwe chete chishuwo cheanoshanda mararamiro pagungwa rinodziya neshamwari. Boka Nzvimbo ine zvese: akasiyana ezvitoro nemakamuri, hotera yekusimbisa uye nzvimbo yehutano; pano zviwanikwa zvinokumirira kwese kwese. Ino inzvimbo inosangana shamwari, vana vanotamba uye kuseka hakumbomira.
Iyo gedhi rehupenyu neimwe nzira.
Central square - nzvimbo yekukwezva uye nzvimbo yekusangana
Fitness hotera SIRO
Energy Center ine dziva rekushambira uye padenga reimba
Gourmet maresitorendi nemaresitorendi
Zvitoro zvekutengesa nezvitoro zvine zvigadzirwa zvinozivikanwa
Concept musika uye gastronomic horo
Cinema ine dzimba nhatu
Indoor yekukwira madziro, kupera kwevhiki, nhandare, kuratidzira kuratidzira
Yakakura chirongwa chezviitiko gore rese
Mumoyo weBoka Nzvimbo mune dzimba dzimba. Zvese nezve iyi yakazara-yakazara, yakazara imba inoitirwa kudzoreredza simba repfungwa nemuviri. Boka Nzvimbo inopa yakasarudzika mhando uye yakakwira Porto Montenegro zviyero ichipa imwe inodhura imwe nzira kune vanonzwisisa vatengi. Iwe unogona kusarudza pakati pemafurati anotungamirirwa neHotel SIRO kana dzimba dzakavanzika.
Kuwanda kwechiedza chechisikigo
Zvinhu zvakanyatsosarudzwa zvine hunyanzvi hwekunakidzwa
Dhizaini inobatanidza inowirirana mashandiro uye aesthetics
Anoshamisa maonero ePorto Montenegro Marina uye Bay yeKotor
Kuwana kune rakakura basa
Idzi dzimba dzakapenya uye dzakapamhamha-dzakarongeka dzimba dzakanaka dzekugara zvachose uye, nekuda kwenzvimbo yadzo, dzinopa kuvanzika kukuru kune avo vanotsvaga runyararo nekuvanzika mukati memiganhu yePorto Montenegro.
69 dzimba dzega
Mukana wekutora chikamu muM-Residences pfuma manejimendi chirongwa
Kuwana kune zvega zvivakwa
Kuwana kune risingaperi dziva uye kuwana kune zvakashongedzwa nzvimbo dzekunze
Mukana wakasarudzika wekusiyanisa yako yemukati nezvinhu zvekushongedza kubva kune vanozivikanwa venyika maartist Bradley Theodor naMiljan Suknovich
Studios, 1, 2 uye 3 dzimba dzekuvata, zvidhori uye penthouses
Boka Nzvimbo uye Montenegro Citizenship:
Varidzi vemapurati vane mukana wakasarudzika wekutora chikamu muMontenegrin Citizenship Investment Chirongwa (CBIP) uye uve mugari wenyika ino inoshamisa. Kutengwa kwemafurati anotarisirwa nehotera muBoka Place kunopa mukana wakasarudzika wekutora chikamu muchirongwa ichi uye kuwana mugari weMontenegro.